Miverina indray ny tsenan'ny World Travel! Ireo mpikambana ao amin'ny tambajotran'izao tontolo izao dia mifanakalo hevitra miaraka amin'ny talen'ny Reed Simon Mayle
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Miverina indray ny tsenan'ny World Travel! Ireo mpikambana ao amin'ny tambajotran'izao tontolo izao dia mifanakalo hevitra miaraka amin'ny talen'ny Reed Simon Mayle
Miantso azy io ny indostrian'ny MICE ny Travel Professionals. MICE dia mijoro amin'ny fivoriana sy famporisihana. Maty i MICE hatramin'ny nipoahan'ny COVID-19 tamin'ny fanafoanana ny ITB Berlin tamin'ny martsa 2020.
Ny Reed Expo izao dia mametraka fironana hanatanterahana ny hetsika indostrialy momba ny dia indray miaraka amin'ny ATB any Dubai sy WTM Latin America any Sao Paulo
Mandroso ny World Travel Market miaraka amin'ny WTM Latin America amin'ny volana aogositra 2021
Reed dia mandroso miaraka amin'ny tsenan'ny Arabian Travel any Dubai (Mey 2021)
Henoy i Simon Mayle, talen'ny WTM Amerika Latina momba ny fomba sy iza ho an'ity fampisehoana varotra indostrialy fitsangantsanganana manan-danja any Brezila ity.
Fanitsiana! Mbola tsy maty i MICE. Hiverina ny MICE amin'ity taona ity miaraka amin'ny fampisehoana varotra fizahan-tany voalohany sy fizahan-tany fizahan-tany Reed Exhibitions miorina any London.
Simon Mayle dia talen'ny hetsika ho an'ny ILTM Amerika Avaratra, ILTM Amerika Latina, traikefa PROUD, ary WTM Amerika Latina ao amin'ny Reed Exhibitions.
Vahiny androany i Simon tao amin'ny eTurboNews fifanakalozan-kevitra miaraka amin'ny Livestream.travel ary ny Tambajotra fizahan-tany manerantany (WTN).
Reed dia mametraka fironana vaovao hanokatra tsimoramora ny fampisehoana varotra fizahan-tany ataon'ireo orinasa miaraka amin'ny tsena Travel Arabian ao Dubai amin'ny volana Mey, ary ny Amerika Latina ny tsena fitetezam-paritany any Sao Paulo, nohamafisina tamin'ny 3-5 Aogositra tamin'ity taona ity.
Hetsika feno herim-po ity, ary voarara ny ankamaroan'ny fivoriana faobe eto amin'izao tontolo izao. Reed Expo dia resy lahatra amin'ny fitomboan'ny vaksininy sy ny fifehezana amin'ny fanaovana sarontava, ny fahadiovana ary ny fanalavirana ny fiaraha-monina, ny hetsika ara-batana toy izany dia vonona hipoitra amin'ity taona ity.
Tamin'ny dinika mitohy momba izay saron-tava mety indrindra hanaovana azy, tsy te-hanamafy i Simon fa tsy maintsy atao any Brezila ny saron-tava N95. Nanamafy izy fa ny kinova virtoaly amin'ny hetsika dia manolo ny fanatrehana ireo izay mbola tsy vonona ny handeha. "Manintona ny fandraisana anjara eo an-toerana izany," hoy i Simon.
Ireo mpikambana ao amin'ny World Network Network dia nanana fanontaniana sy hevitra maro.
Dingana matanjaka iray alohan'i Reed io, ary mpikambana maro sosotra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany no miomana handray ny fanamafisana fa ny WTM dia lasa tantara mahomby.